DAAWO: wareysiyada ka qeybgalayaashi shirkii Sweden |
DAAWO: wareysiyada ka qeybgalayaashi shirkii Sweden
Shirka Swedan ka furmay oo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo sidii ganacsiga Soomaaliya gacan looga geysan lahaa ayaa waxaa ka qeybgalaya dhinacyo kala duwan oo Soomaaliya matelaya. Waxaana yimid Dowlada Soomaaliya, Puntland, Jubba oo ay ka socdaan Maamulka Ahmed Madoobe iyo Mucaaradka maamulkaasi oo uu horkacayo Dr, Ahmed Ducaale.
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay inay shirkan ku hanweyn yihiin haddii loo maro wadada sax ah islamarkaana looga faa’ideyn
Dr, Ahmed Ducaale
karo shacabka Soomaaliyeed, iyaddoo Dr, Ahmed Ducaale oo ah aqoonyahan ku xeeldheer arrimaha dhaqaalaha islamarkaana shirkan ku matelayey mucaaradka Jubba ayaa sheegay inay wax badan Soomaalida ka heli karto shirkan iyo kuwa kale ee soo socda, waxaase uu ka digay in mashaariicda lala imaanayo dhanka Soomaalida uusan noqon kuwa liita.
Dr, Ahmed Ducaale oo Somalichannel TV kula hadlay goobta uu shirku ka socdo ayaa waxaa uu sheegay isaga oo ka duulacaya aqoontiisa dhaqaalaha in dalalka Yurub wax badan ay la qaban karaan Soomaaliya, waxaase uu sheegay in lala yimaado waji ka duwan wixii horey loogu yaqaanay Soomaalida.
Danjiraha dowlada Swedan u fadhiya Soomaaliya oo isna dhankiisa ka hadlay shirkan ayaa waxaa uu sheegay in dalka Soomaaliya ka jiraan fursado badan oo dhaqaale lagu sameyn karo islamarkaana ay barbar socdaan fursado dunida horumartay oo uu dalka Swedan ku jiro ay wax kula qaban karaan shacabka Soomaaliyeed.
Halkan hoose ka fiirso wareysiyada madaxda shirkaasi ka qeybgashay lala yeeshay oo uu ku yiri Dr, Ahmed Ducaalehttps: